Varavarana firavaka alimina alim-baravarankely sy fanodinana varavarankely Ouzhan
Varavarana firaka aliminioma sy fitrandrahana varavarankely
Tao anatin'ny am-polony taona vitsivitsy monja dia nampiasa teknolojia mandroso ny indostria mba hampiroborobo ny fanitsiana ny firafitry ny indostria, nampiroborobo ny fanavaozana ny vokatra, ny fanatsarana ny rafitra, ny siansa sy ny haitao farany azo, ary nanenjana ny elanelana tamin'ny haavo iraisam-pirenena. ny indostrian'ny rindrin'ny firakotra sy ny varavarankelin'ny fireneko dia niaina fivoarana lehibe. Ny varavarana sy ny varavarankely vita amin'ny firaka alimina dia vokatry ny fampivoarana ireo fitaovana fananganana trano maoderina. Izy ireo dia novolavolaina tany amin'ny firenena mandroso toa an'i Alemana, Etazonia, ary i Angletera tamin'ny taona 1930 tany ho any. Satria maivana amin'ny fitaovana ny mombamomba ny alimo aliminioma, afaka mamoaka mombamomba azy ireo izy ireo amin'ny endriny miampita sisin-dàlana, indrindra ny aliminioma Ny fisehoan'ny vavahady alim-baravarana sy ny varavarankely ary ny fananana ara-batana tsara dia tsara izay nanamafisan'ireo mpanao mari-trano.
Endri-javatra mombamomba ny aluminium
Fanoherana ny harafesina alimina alimina: 2,7g / cm3 fotsiny ny hakitroky ny profil aluminium, izay manodidina ny 1/3 amin'ny hakitroky ny vy, varahina na varahina (7.83g / cm3, 8.93g / cm3). Eo ambanin'ny ankamaroan'ny toe-javatra iainana, anisan'izany ny rivotra, rano (na rano masira), petrochemical ary rafitra simika maro, ny aluminium dia afaka mampiseho fanoherana tsara harafesina.
Fitondrana profil aluminium: matetika ny profil Aluminium no voafantina noho ny fitondra tena tsara. Miorina amin'ny lanja mitovy, ny fitaritana ny aliminioma dia manakaiky ny 1/2 ny varahina.
Fitaovam-pitaterana mafana: Ny fitarihana hafanana an'ny firaka aliminioma dia manodidina ny 50-60% amin'ny varahina, izay mahasoa amin'ny fananganana mpivarotra hafanana, evaporator, fitaovana fanamainana, kojakoja fandrahoan-tsakafo, lohan'ny varingarina sy lovantsary.
Non-ferromagnetic: Ny mombamomba ny aliminioma dia tsy ferromagnetika, izay singa manandanja ho an'ny indostrian'ny herinaratra sy elektronika. Ny mombamomba ny aliminioma dia tsy mora may, izay zava-dehibe amin'ny rindranasa mifandraika amin'ny fikirakirana na ny fifandraisana amin'ireo fitaovana mora mirehitra sy mipoaka.
Ny fahaiza-miasa: ny fahaiza-miasa amin'ny profil aluminium dia tsara. Amin'ny firaka alimina alimo marolafy sy alimo alimina alimo, ary koa amin'ny fanjakana isan-karazany ananan'ireto alloys ireto aorian'ny famokarana azy, miovaova be ny toetra mampiavaka ny milina, izay mila fitaovana na teknolojia manokana.
Formability: ny tanjaka manokana, ny tanjaka, ny fikojakojana ary ny tahan'ny fanamafisana ny asa mifandraika amin'izany dia manapaka ny fiovana amin'ny fiovana azo avela.
Recyclability: Ny aliminioma dia azo averina madiodio, ary ny toetoetran'ny alimina voaverina dia saika tsy hay avahana amin'ny alimina voalohany.
Varavarana firavaka alimina alim-baravarankely sy ny ampahany fantsona fantsona
Material Firaka aliminioma (fitaovana tsy voatery)
Fampiasana Mpanakalo, etona etona, fitaovana fanamainana, kojakoja fandrahoan-tsakafo, lohan-tsolika sy radiatera sns.
Previous: Sombin-tsolika vita amin'ny alimina alim-pito
Manaraka: Miraikitra amin'ny faritra vy tsy misy vy